Robert Lewandowski Oo Xaqiijiyay Inuu Doonayo Inuu Ka Tago Bayern Munich
HomeWararka CiyaarahaRobert Lewandowski oo xaqiijiyay inuu doonayo inuu ka tago Bayern Munich
May 15, 2022 Wararka Ciyaaraha, Horyaalka Germalka, Suuqa kala iibsiga 0
Weeraryahanka Bayern Munich Robert Lewandowski ayaa xaqiijiyay inuu doonayo inuu ka tago kooxda dhamaadka xilli ciyaareedkan, iyadoo ay jiraan warar xan ah oo sheegaya inuu u dhaqaaqayo Barcelona .
33-sano jirkaan ayaa u arka in heshiiskiisa Bavaria uu dhacayo Juun 2023, iyadoo aan wax heshiis kordhin ah la helin, xiisaha Barcelona ayaa lagu soo waramayaa inuu sii kordhayay toddobaadyadii la soo dhaafay.
Lewandowski ayaa sheegay in uu kooxda ku wargaliyay maalmihii ugu dambeeyay go’aankii uu kaga soo horjeeday in uu heshiis cusub u saxiixo, inkasta oo madaxda Bayern ay sii wadaan in ay ku adkaystaan ​​in xiddiga reer Poland uu kooxda sii joogi doono sanad kale.
Si kastaba ha ahaatee, ciyaaryahankii hore ee Borussia Dortmund ayaa si cad u daaha ka qaaday go’aankiisa ka dib ciyaartii ugu dambeysay ee Bayern ay ku ciyaartay Wolfsburg sabtidii.
Isagoo hadlayay ka dib barbarihii 2-2 ee ka dhacay Volkswagen Arena, Lewandowski ayaa u sheegay Sky : “Ma saxiixi doono heshiis cusub, waa inaan u helnaa xalka ugu fiican labada dhinac, waxaan u sheegay kooxda in hadii dalab yimaado, markaas waan sameynaa. waa inaad ka fikirtaa – sidoo kale kooxda.”
Lewandowski ayaa dhaliyay goolkiisii ​​50-aad ee ololahan Bavarians inta lagu guda jiro ciyaartaas, isagoo dhaliyay 344 gool 375 kulan oo uu saftay tan iyo markii uu ku soo biiray 2014.